Ao anaty boaty an'ny iPhone vaovao dia tsy hanampy ny adaptatera ho an'ny headphone 3,5mm | Vaovao IPhone
Toa ireo iPhones vaovao amin'ity taona ity tsy azon'izy ireo ny manampy ny adaptatera Jiro / 3,5mm ao anaty boaty ary tsikelikely dia mihahery ny tsaho. Ity adaptatera izay tonga ao anaty boaty iPhone avy amin'ny maodely iPhone 7 ity dia hijanona tsy atolotra maimaim-poana amin'ny fividianana iPhone vaovao amin'ity taona ity.
Raha ny marina, ny ankamaroantsika dia mampiasa headphones tsy misy tariby mivantana ary io no tadiavin'i Apple hampiroborobo, saingy mazava ho azy, toa somary hafahafa amintsika izany esory tampoka ity fitaovana ity na dongle tafiditra ao anaty boaty ary raha azony amidy amin'ny magazay ...
Fitaovana iray hafa hividianana
Toa somary hafahafa amintsika ity hetsika ity ary afaka mieritreritra isika fa tetika iray io hahazoana vola bebe kokoa. Tsy vaovao voamarina izany fa ny orinasa miandraikitra ny fanamboarana ireo kojakoja ireo, Cirrus Logic, dia naneho hevitra tamin'ny fihaonambe momba ny valim-bola fa hihena ny isan'ny mpamokatra ao anatin'ny volana ho avy, zavatra iray izay mahatonga antsika hieritreritra fa ity fitaovana ity dianesorina tao anaty boaty mba hifindra any amin'ny talantalan'ny fivarotana Apple.
Inona tena tsara tokoa raha ampiana AirPod sasany amin'ny boaty iPhone, fiovana tsara izany. Eny ary, manonofinofy izany ary ireo tovolahy avy any Cupertino dia tsy hijanona amin'ny fahazoana vola amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo headphone tsy misy tariby ireo amin'ny boaty iPhone.
Miaraka amin'ny tongotray amin'ny tany isika, dia tsy maintsy lazaina fa taorian'ny fitabatabana rehetra natsangana tamin'ny tsy fisian'ny mpampitohy jack 3,5mm avy amin'ny iPhone 7, amin'ny tranga misy ahy sy amin'ny mpampiasa maro dia tsy mbola nampiasa ilay adapter mihitsy izahay hampifandraisana headphones, inona no sary an-tsaina olona an-tapitrisany toa antsika isika. Ankoatr'izay, ny fifaninanana dia manafoana an'ity jack taloha ity amin'ny finday avo lenta findainy ary tsikelikely ny fironana dia milaza fa hiafara manjavona tanteraka izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Ny adapter headphone 3,5mm dia tsy ho ampidirina amin'ny boatin'ny iPhone vaovao
Ny Plex for iOS dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana vaovao mifandraika amin'ny podcast